प्रत्येक बर्ष नयाँ बीमा योजना ल्याउँछौ: मनोज कुमार भट्टराई,सीइओ-प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्स – Insurance Khabar
प्रत्येक बर्ष नयाँ बीमा योजना ल्याउँछौ: मनोज कुमार भट्टराई,सीइओ-प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्स
प्रकाशित मिति : १ पुष २०७५, आईतवार १३:५२
मनोज कुमारभट्टराई ,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्स
नेपाल औद्योगिक विकास निगमबाट आफनो करिअर सुरु गरेका मनोज कुमार भट्टराईले बीमा क्षेत्रमा करिब २० बर्ष विताईसकेका छन् । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स, ग्रान्ड बैंक हुँदै अहिले उनी प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
प्राईम लाईफमा उनको यो दोस्रो कार्यकाल हो । उनको आफनो काम प्रतिको लगनशिलताका कारण नै कम्पनीलाई आफुलाई दोस्रो कार्यकालको लागी नियुक्त गरेको उनको दाबी छ । बीमा, बैंक तथा अन्य विभिन्न प्रोजेक्टको समेत अनुभव बटुलेका भटट्राई बीमा क्षेत्रमा काम गर्दा बढी सन्तुष्ट मिलेको बताउँछन् । उनको बिचारमा बिमा व्यवसाय मात्रै हैन सेवा पनि हो । अरुको जोखिम लिदै र सुरक्षित बनाउँदै गरिने व्यापार भएकाले यसमा चुनौती र अवसर दुवै भएको बताउँछन । यसै सन्दर्भमा कम्पनीको आगामी योजना र यसकोे गतिविधीमा आधारीत रहेर प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टराईसँग इन्स्योरेन्सखबरकर्मी रिना खत्रीले गरेको कुराकानीको सार :
हालको सम्रग बीमा बजार कस्तो रहेको छ ?
विगत चार पाँच बर्षदेखि बिमा बजार राम्रो हुँदै गएको छ । चार पाँच बर्षभन्दा अघिको बार्षिक वृद्धिदरमा र हालको बार्षिक वृद्धिदर हेर्ने हो भने धेरै गुणाले बृद्धि भएको देख्न सकिन्छ । जीवन बीमाको हकमा भन्नुपर्दा यसको अवधी लामो हुने हुन्छ र नवीकरणको बीमा पनि थपिदै जान्छ । नयाँ बीमा पनि आउदै जान्छ । औसतमा हेर्ने हो भने पनि आगामी दिनहरुको भन्दा राम्रो वृद्धिरमा देख्न सकिन्छ ।
नयाँ कम्पनीहरु सञ्चालन आएपछिको नेपालको बिमा कम्पनीहरुको अवस्था कस्तो छ ? नयाँ कम्पनीहरु आएसँगै व्यवसाय पनि बढेको हो ।
नयाँ कम्पनी आएसँगै पूराना कम्पनीहरुलाई फाईदा नै हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुको विस्तारसँगै जनचेतना र विश्वासको वातावरण समेत तय भएको छ । केही हदसम्म यो कुरा सत्य पनि हो । विगतको दिनमा केही सिमित बीमा कम्पनीहरु रहेको थियो । सिमित बीमा कम्पनीहरुका अभिकर्ताहरुले बीमाको बारेमा बुझाउदाँ वा चेतना दिदाँ तुरुन्तै विश्वास गरिहाल्ने वातावरण भनेको थिएन् । केही सिमित व्यक्तिले मात्र बीमाको कुरा गर्दा विश्वास पनि गर्दैनथ्यो । तर नयाँ कम्पनीहरुको विस्तार भएसँगै सबैजनाले बीमाको बारेमा भनिरहदा यो गलत कुरा हैन रहेछ भन्ने धारणा आमजनमानसमा आउँछ । यदि गलत भएको भए किन यती धेरै मानिसहरुले यसको कुरा गर्छ । सङख्यात्मक हिसाबले यसको प्रचार भएको कारण बीमा गर्नु ठिक हो भन्ने जानकारी सबैमा पुग्न जान्छ । तर नयाँ बीमा कम्पनी थपीएसँगै जुन रुपमा जुन रुपमा व्यवसाय बढ्नुपर्ने हो । उक्त अवस्थामा भने बजार बढ्न सकेको छैन । बीमा भन्दा पनि मानिसहरुले एकमुष्ट प्रिमियम तिर्यो भने ऋण पनि पाईन्छ । बीमा पनि सित्तैमा पाईन्छ, भनेर अलि फरक ढ्ङगबाट प्रस्तुत भएको कारणले पनि बीमामा प्रिमियमको हिसाबले बढेको देखिन्छ । बीमा नयाँ कम्पनीको बिस्तारसगै स्वस्थ्य रुपमा बीमा गराउनेको वातावरण भने तय गर्न सेकेको छैन ।
बीमा सम्बन्धि आम जनमानसमा कस्तो बुझाई रहेको पाउँनुहुन्छ ?
मेरो आजसम्मको बीमा प्रतीको बुझाईलाई हेर्ने हो, जुन हिसाबबाट बीमाको बजार विस्तार गर्ने भन्ने धारणाबाट हिडिरेहेका छौ त्यो हिसाबमा भन्ने हो भने बीमाको शिक्षा नै दिन सकेका छैनौ । बीमाको जनचेतना बीमा सम्बन्धि हामीले न्यून कुरा पनि बुझाउन सकेका छैनौ बीमा केका लागि भनेर बुझाउन सकेका छैनौ । अझै पनि बीमा गराउदाँ बीमा बुझाएर बीमा गराईरहेका छैन । बीमा के हो भनेर बुझाउनुभन्दा पनि यसका अन्य लाभहरुको आश्वासन दिएर बीमा गराईरहेका छन् । अझै पनि बीमीतहरु मिसगाईड नै भईरहेको छ । सही ढङगबाट बीमा भईरहेको छैन । सङख्यात्मक रुपमा प्रिमियमको रुपमा बीमा बढेको छ । जुन हिसाबले बीमा कम्पनीहरुको सङख्या बढेपनि अभिकर्ताहरुको सङख्या बढेपनि सही रुपबाट बीमीतलाई बीमाको बारेमा बुझाउन भने सकेको छैन ।
समितिले दिएको पहिलो अवधि भित्र तपाईको कम्पनीले पूँजी जुटाउन सकेन ? अबको छ महिना थप समय छ । यो समयमा पूँजी बढाउने कस्तो योजना छ ?
बीमा समितीले दिएको पहिलो चरणको अवधी अझैपनि बाँकी नै छ । समितीले कम्पनीहरुले २०७५ असार मसान्तसम्ममा गरेको मुनाफा बाँडेर पनि यदि पुँजी पुग्छ भने त्यसलाई हामी पँुजँी पुगेको मान्छौ भनेको छ । यो आधारमा कुरा गर्ने हो भने आजको मितीमा प्राईम लाईफको पुँजी पुगीसकेको छ । पुँजी पुगीसकेको छ म किन भनिरहेको छु भने कम्पनीले १ अर्ब ७८ करोड २२ लाख पुँजी पुगी नै सकेको छ । अब हामीले करीब २१ करोड चानचुनको पुँजी पुर्याउन बाँकि रहेको छ । कम्पनीले आज पनि शेयरहोल्डरहरुलाई बाड्न सक्ने मुनाफा करीब–करीब ४४ करोड रहेको छ । समितीले जबसम्म हाम्रो ब्यालेनसिट स्वीकृत गदैन । तबसम्म हामीले बार्षिक साधारणसभा गर्न सक्दैनौ । जबसम्म बार्षिक साधारणसभा हुदैन तबसम्म हामी बोनस शेयर बाड्न सक्दैनौ । यो कुरा हाम्रो हातमा भन्दा पनि नियमनकारीको हातमा रहेको हुन्छ । नियमनकारी निकायले यदि कुनै कम्पनीहरुको ७५ सालको असार मसान्तसम्ममा शेयर हेल्डर फन्डमा बाड्न सक्ने मुनाफाको रकम जोड्दा फेरी पुँजी पुगेको छ भने पूँजी पुगेको भन्नुपर्छ । बीमा समितीले साधारणसभा हुदै गर्छ शेयरहेल्डरलाई बोनस बाडी देउ भन्यो भने हामी तयार छौ । अन्य कम्पनीको बारेमा मलाई थाहा भएन हाम्रो कम्पनीको पुगेको छ ।
नयाँ बीमा बिद्येयक संसदमा पुगेको छ । अब आउँने ऐनमा कस्तो खालको अपेक्षा गर्नु भएको छ ?
विधेयक एक नितान्त कुरा हो । हामी एक व्यवसायी हौ । मुलुकको कानुन अनुसार व्यवसायी हौ । बीमा बिधेयक र बीमा समितीबाट बेलाबखतमा निर्दशन हुने निर्देशीकाको पालना गरेर हामी कम्पनी संचालन गरिरहेका हुन्छौ । हाम्रो एउटै भनाई के रहेको छ भने हामी बलियो हुन, राम्रो हुन बीमा बजार नै राम्रो हुनको लागि हाम्रो नियमनकारी निकाय बलियो हुनुपर्छ । विगतको दिनमा फर्केर हेर्ने र आजको दिनमा हेर्ने हो भने बैंक प्रति ग्राहहरुको विश्वास अत्याधिक बढेको छ र पहुँच पनि त्यक्ति मात्रमा नै बढेको छ । कुनै बेला १७-१८ प्रतिशत मात्र पहँुच थियो भने आज बैंकको आज ६० प्रतिशत बैंकको पहुँच बृद्धि भईसकेको छ । राष्ट्र बैंक बलियो भएको कारणले गर्दा मानिसहरुले यसमा विश्वास गर्न थालेका छन् । उक्त विश्वासको वातावरण पनि बीमामा आउन जरुरी रहेको छ । भोलिको दिनमा बीमीतले कुनै पनि कम्पनीमा बीमा गर्दा भोलिको दिनमा कम्पनी राम्ररी संचालन हुन सकेन र कम्पनीले भोलिको दिनमा कुनै बदमासी गर्यो भने पनि बीमा गरेको बीमीतको सुरक्षाको वातावरण तय गरिनुपर्छ । बेला–बेलामा कम्पनीको सर्भे गनुपर्छ । एउटा कम्पनीले बदमासी गरयो भनेर नयाँ निर्देशीका जारी गर्नु भएन । जो चिजको पनि सिस्टम बजाएर अघि बढ्नुपर्ने रहेको हुन्छ ।
तपाईको कम्पनी र प्राईम लाईफको प्रडक्टमा के फरक छ ?
हाम्रो कम्पनीले प्राईम जीवन उपहार (अग्रिम भुक्तानी एवं सवाधिक) मा बीमाङ्क डब्बल प्रिमियम सिगंल योजना ल्याएको छ । प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्सको प्राईम जीवन उपहार योजनमा प्रिमियम सिगंल र बीमाङ्की डबल पाउने व्यवस्था गरिएको छ । । जसमा बीमीतले एउटा बीमा खरीद गर्दा प्रारम्भ मितीले पहिले बार्षिकोत्सवमा अर्को बीमा उपहार स्वरुप सित्तैमा पाउने व्यवस्था रहेको छ । बीमीतले बीमाङ्की डबल पाएपनि प्रिमियम भने सिगंल नै तिनुपर्ने फाईदा रहेको छ । यस बीमा योजना १६ देखि ५४ बर्षसम्मको व्यक्तिले खरीद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै अन्य योजनाहरुमा प्राईम लाईफ सुरक्षित आवास जीवन बीमा योजना, प्राईम लाईफ धन सागर योजना, प्राईम लाईफ स्वर्णिम जीवन बीमा, प्राईम लाईफ सरल बीमा योजना रहेको छ ।
नयाँ विद्येयकमा बिमा अभिकर्ताहरुले एउटा मात्रै कम्पनीमा काम गर्न पाउँने व्यवस्था गरिएको छ । हजुरको बिचारमा के लाग्छ ?
बीमालाई राम्रोसगँ अघि बढाएर लग्ने हो भने यो विधेयकले पक्कै पनि राम्रो काम गर्छ । एउटा भन्दा बढी कम्पनीमा काम गर्दा जताबाट फाईदा हुन्छ त्यसै अनुरुप बीमा गराईरहेको हुन्छ । बीमीतको चाहाना अनुसार पोडक्टहरु सेल भएको हुदैन । यहीबाट मिस सेलिङको पनि कुरा आउन सक्छ । कम्पनीले पनि अभिकर्ताहरुको क्षमता अभिवृद्धिको लागि लगानी गरिरहेको हुन्छ ।
समितिले नयाँ तालिम केन्द्र स्थापना गरेको छ । यसबाट तपाईहरुले कस्तो अपेक्षा राख्नु भएको छ ?
यसले बीमाको बजार पक्कै पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दछ । बीमा बजार दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको छ । बीमाको बजारमा अझै पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ । बीमाको क्षेत्रमा काम गर्न चाह्ने कर्मचारीहरुको पनि रुची कमी नै देख्न पाईन्छ । सायद अबको दिनमा यसले सही ढङगबाट काम गरेर अघि बढ्न सहयोग गर्दछ ।
बिमा चेतनाका लागी तपाईले कति रकम विनियोजन गरेको छ ।
हामी ठाँउ–ठाँउमा गएर बीमा चेतनाको कार्यक्रम राखिरहेका हुन्छौ । अभिकर्ताहरुको क्षमता अभिवृद्धि लागि तालिमहरु पनि गरिरहेको हुन्छौ । बीमाको अन्तक्रिया कार्यक्रम गररहेका हुन्छौ । फागुन महिनामा प्रदेशका व्यक्तिहरुको लागि बीमा चेतनाको तालिम आयोजना गर्ने तयारीमा छौं ।
बीमा चेतना बढाउन बीमा समितीले गर्नुपर्छ ?
बीमाको बजार बढाउनको बीमा चेतनामा ध्यान दिनु जरुरी रहेको छ । सही ढ्ङगबाट बीमा चेतना दियो भने मात्र बीमाको बजारमा वृद्धि हुन सक्छ । बीमा कम्पनीको तर्फबाट बीमा सम्बन्धि चेतनाको लागि जतीसुकै कुरा गरेपनि कम्पनीको विज्ञापनको लागि आएको हो भन्ने मानसिकता पर्न जान्छ । त्यसैले बीमा समितीले बीमा गर्दा कुन–कुन कुरामा ध्यान दिने, कस्तो अवस्थामा बीमाको मिससेलिङ हुन्छ । बीमाको बारेमा बुझनेको सङख्या ज्यादै न्यून भएको कारण विभिन्न बीमा सम्बन्धि अन्तक्रिया कार्यक्रमहरु बेला–बेलामा राख्ने गर्नुपर्दछ । बीमा कम्पनीहरुले पत्रकारहरुलाई पनि तालिम दिन आवश्यक छ । पत्रकारहरुलाई तालिम दिदाँ सही सूचना समेत सम्पेषण हुने हुदाँ यसमा पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको छ ।
कम्पनीहरुले अझै पनि समयमा दाबी भुक्तानी गर्देनन् भन्ने गुनासो छ नि ?
यदि कम्पनीलाई बीमीतले आवश्य कागजातहरु ल्याएर दिएको खण्डमा दाबी भुक्तानी दिनमा हिचकिचाउँ पर्देन । कम्पनीहरुको पनि आफनो नियम र परिधि भएको कारणले गर्दा आवश्यक कागजात पुगेको खण्डमा हामीले दाबी भुक्तानी सहज रुपमा दिईरहेका हुन्छौ । यदि दाबी पाउने अवस्थामा पनि कम्पनीले दाबी दिएको छैन भने कम्पनीलाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ ।
बिमा क्षेत्रका चुनौतीहरु के के छन् ?
मुख्यत : बीमा क्षेत्रको चुनौतीको रुपमा बीमा चेतना नै रहेको छ । जनशक्तिको आधारमा कम्पनीहरुको सङख्या बढी भएको छ । मुलुकको सङख्या अनुसार कम्पनीहरु बढी रहेको नै रहेको छ । मिस सेलिङको घटनाहरु पनि नित्याईरहेको छ । बजारमा जसले राम्रो काम गरेर जुन कम्पनी अघि बढ्न सक्छ । त्यो कम्पनीलाई राम्रो अवसरहरु पनि रहेको छ । मिस सेलिङको कुरा आउदा एउटा कम्पनीले गर्दा सम्रग बीमा बजारमा यसको असर पर्न गएको छ । बीमा कम्पनीमा दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि रहेको छ । बीमाको क्षेत्रमा काम गर्न कर्मचारीहरुको आकर्षण कम रहेको छ ।
आगामी दिनमा कम्पनीलाई अघि बढाउन कस्तो रणनिती बनाउँनु भएको छ ?
प्रत्येक एक बर्षमा नयाँ योजना ल्याउने हाम्रो योजना रहेको छ । यो कम्पनीलाई अग्रस्थानमा पुव्याउने कम्पनीको विश्वनीयताको वातावरण तय गराउने र आकार बढाउने रहेको छ । यदि नयाँ योजना ल्याउन नसकेको खण्डमा पूरानै योजनामा थप सुविधा दिने रहेको छ । सेयर होल्डरहरुलाई न्यूनतम रिर्टन दिने योजना रहेको र यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिने रहेको छ ।
रिलायन्स लाइफद्धारा १० लाख रुपैयाँ बीमा दाबी भुक्तानी